Proverbe 32 Adin' ombalahy ka no atakalo izay adin' ombivavy . [Rinara 1974]
Proverbe 33 Adin' ombalahin' ny mpianakavy : ny mahery tsy hobena , ny resy tsy akoraina . [Rajemisa 1985 #437]
Adin' ombalahin' ny mpianakavy : ny mahery tsy hobina , ny resy tsy akoraina . [Rajemisa 1985 #437]
Adin' ombalahin' ny mpianakavy , ny resy tsy akoraina , ny mahery tsy hobena . [Rajemisa 1985 #780]
Adin' ombilahin’ ny mpianakavy : ny mahery tsy hobena, ny resy, tsy akoraina . [Cousins 1871 #17]
Proverbe 172 Akondro niadian' ombalahy : herinandro tsy mahafoha tena . [Veyrières 1913 #745, Rinara 1974 #91]
Akondro niadian’ ombilahy : herinandro tsy mahafoha tena . [Cousins 1871 #76]
Proverbe 858 Aza atao verin' ny adin-dreniomby ny adin' ombalahy . [Rinara 1974]
Aza atao verin' ny adin-dreniomby ny adin' ombilahy . [Cousins 1871 #373, Houlder 1895]
Sondrian' ny adin-dreniomby , ka ny adin' ombalahy no hadinoina . [Veyrières 1913 #3300]
Verin' ny adin-dreniomby ny adin' ombalahy . [Veyrières 1913 #3300, Abinal 1888]
Very tamin' ny adin-dreniomby lahy, ny adin' ombalahy ! [Rinara 1974 #4946]
Proverbe 1143 Aza manao tahaka ny vorontsiloza : miebanebana tsy ankizivavy , dia izy ihany; manakora tsy adin’ ombilahy , dia izy ihany; miambozom-boahangy tsy renin-jaza , dia izy ihany; maneno tsy ampongabe, dia izy ihany. [Cousins 1871]
Aza manao tahaka ny vorontsiloza : mikorefarefa tsy ankizivavy , dia izy ihany, manakora tsy adin' ombalahy , dia izy ihany, miambozom-boahangy tsy renin-jaza , dia izy ihany, midoboka tsy ampongabe , dia mbola izy ihany koa. [Rinara 1974]
Aza manao tahaka ny vorontsiloza : mikorefarefa tsy ankizivavy , dia izy ihany; manakora tsy adin’ ombilahy , dia izy ihany; miambozom-boahangy tsy renin-jaza , dia izy ihany; midoboka tsy ampongabe, dia izy ihany. [Cousins 1871]
Proverbe 1404 Aza milaza miara-mahita . [Houlder 1895]
Aza milaza miara-mahita , tahaka ny adin’ ombilahy an-tsena. [Cousins 1871 #628]
Aza milaza miara-mahita , tahaky ny adin' ombalahy an-tsena. [Veyrières 1913 #4738]
Milaza miara-mahita , tahaka ny adin' ombalahy . [Rinara 1974 #2343]
Milaza miara-mahita , toy ny adin’ ombilahy . [Cousins 1871 #1788]
Proverbe 2474 Hono, ry andrian-tsy vahoaka : ny ombilahy va no miady , fa ny vato be no mikorontana ? Tsy ny vato no mikorontana, tsy ny ombilahy no miady , fa Andriantiazaza no maty . [Cousins 1871 #1099]
Proverbe 2511 Ilay jamba nampiady ombalahy : lany ritra ny zana- bahoaka raha izay alehako no alehany . [Rinara 1974 #1398]
Ilay jamba nampiady ombalahy : " lany ritra ny zana- bahoaka , raha izay alehako no nalehany " . [Veyrières 1913 #2148]
Ilay jamba nampiady ombilahy : "Lany ritra ny zana-bahoaka , raha izay alehako izay no nalehany ". [Cousins 1871 #1112]
Proverbe 5429 Ny ombalahy no miady , ka ny omby vositra no mitsaraingona . [Veyrières 1913 #3501]
Ny ombilahy no miady , ka ny omby vositra no mitsaraingona . [Rinara 1974 #3190, Cousins 1871 #2381]